Ogaden News Agency (ONA) – Addis Ababa oo Koronto La’aan Badan Ay Kajirto.
Addis Ababa oo Koronto La’aan Badan Ay Kajirto.
Warar lagu kalsoon yahay oon kahellay magaalada Addis Ababa ayaa sheegaya ineey koronto la’aan badan ay kajirto magaalada. Arintan oo saamayn wayn ku yeelatay nolol maalmeedka shacabka ku dhaqan magaalada Addis Ababa gaar ahaan kuwa meheradaha haysata sida Warshadaha iyo Hoteelada Cuntada laga cuno.
Warkan ayaa intaas kudaraya in korontada magaalada Addis Ababa ay caqabad wayn ku noqotay wax soosaarka Warshadaha cuntada sameeya iyo adeegyada kalee muhiimka ah, arintan oo keentay sicir barar aan caadi ahayn oo qiimaha cuntada daruuriga ah ay sare u keceen.
Ganacsato iyo shacab kaloo caadi ah ayaa aad uga walbahaarsan xaaladan koronto la’aanta ah ee soo noqnoqonaysa iyo mustaqbalka meheradahooda iyadoo saamayn ku yeelatay geedi socodka meheradaha caadiga ah ee shacabka noloshiisu ay ku tiirsan tahay. Maamulka Magaalada Addis Ababa ayaa dhawr jeer balan qaadyo kusaabsan ineey arintan wax kaqabanayaan sameeyay taasoo aysan waxba ka suurta galin.
Waxaa iswaydiin mudan hadii magaalo madaxdii wadanka ay sidaas katahay koronto la’aanta kajirta, sideey noqonaysaa gobolada kale ee wadanka gaar ahaan Ogadenya?